ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ - Page 24 of 28 - မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်
တိုင်ကြားစာနှင့်အသနားခံစာ၊ တင်ပြစာများနှင့်အထွေထွေကိစ္စရပ်များ လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီ
ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစိစစ်ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီ
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ
ကော်မတီ [ ၆ ] ရပ်
ဒုတိယအကြိမ်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့)အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၈)ရက်၊ နံနက်(၁၀း၀၀)နာရီအချိန်တွင် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ် ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၃၁)ဦးရှိသည့်အနက် (၃၁)ဦး တက်ရောက်သဖြင့် (၁၀၀%)ဖြစ်ပါသည်။…..
၁။ ပထမအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (စတုတ္ထနေ့)ကို (၂၄.၁၂.၂၀၁၅)ရက်နေ့ (၁၀း၀၀)နာရီအချိန်တွင် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်(၃၀)ဦးအနက် (၃၀)ဦးတက်ရောက်မှု အခြေအနေကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မွန်ပြည်နယ်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေ သုံးစွဲရေးဥပဒေကြမ်းအား တင်သွင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး၏ ဆွေးနွေး အကြံပြုချက်အား မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်၂၀၁၅-၂၀၁၆ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မွန်ပြည်နယ်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ……
ပထမအကြိမ်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယနေ့) ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
၁။ ပထမအကြိမ်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)ကို (၁၁.၁၂.၂၀၁၅) ရက်နေ့ (၁၀း၀၀)နာရီအချိန်တွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။ …..
ပထမအကြိမ်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့) ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
ပထမအကြိမ်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ဒုတိယနေ့)ကို (၁၀.၁၂.၂၀၁၅)ရက်နေ့ (၁၀း၀၀)နာရီအချိန်တွင် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၃၀)ဦးအနက် ယမန်နေ့က ပျက်ကွက်သူ(၂)ဦး၊ ယနေ့ ပျက်ကွက်သူ(၁)ဦး၊ စုစုပေါင်းပျက်ကွက်သူ(၃)ဦးနှင့် (၂၇)ဦး တက်ရောက်မှုအခြေအနေကို …..
2019 Copyright &COPY; All Rights Reserved. မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်.
Creative by Digital Dots.